ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 5) | Lumyo Chit
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 5)
1312 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 11:03am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့ ပြန်ကျဲနေသောမွတ်ဆလင်များ(အဆက် – ၂ )
၈။- ရခိုင်ဘုရင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ၊မကွဲခြားဘဲမျှမျှတတအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးလွပ်လတ်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ဘုရင်ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်စည်းလုံးရေးအတွက် အစ္စလာမ် အမည်ဘွဲ့ ကိုခံယူခြင်း ရှေးရခိုင် ဘုရင်များ၏ အမြော်အမြင်ကြီးမား
ပုံကိုစံနမူနာ ယူစရာဖြစ်သည်ဟု ဦးကြည်(B.A )ရေးမြန်မာရာဇဝင်သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာ ကို ကိုးကား ၍ တိုင်းရင်သားလူမျိုးစု သတင်လွှာက ရေသားဖေါ်ပြထားသည်။
၉။- စန္ဒသုဓမ္မရာဇမင်း(၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက်ထက်တွင် အိန္ဒိယ မဂိုဧကရာဇ် ရှဂျီဟန်၏ ဒုတိယသား တော် ရှားရှူးဂျားနျင့် အတူ နောက်လိုက်အင်အား(၃၀၀) နှင့် ၁၆၆၀ ပြည့် ရခိုင်ပြည်သို့ဝင်ရောက် ခိုလှုံကြောင်း ရခိုင် သမိုင်း၊မြန်မာသမိုင်း၊ကမ္ဘာ့သမိုင်း တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။
၁၀။- ၁၆၆၈ ခုနှစ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ရှားရှူးဂျားဗလီကြီးကို တည်ဆောက်ထားသည်ကို ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်ရသော ရှေးခေ တ် ကပင်မွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်းသမိုင်း အထောက်ဖြစ်သည်။
၁၁။- ရခိုင်ဘုရင်သုံးဒင်္ဂါးများတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဂုဏ်တော် ကိုတံးဆိပ်အဖြစ်ထု ထားသော အထောက် အထားများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာ သည် ရှေးနှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်ကတည်းက ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သာဓက ဖြစ်သည်။
၁၂။- သမိုင်း D.G. E Hall က ခရစ်နှစ်ဦးကာလတွင် ရခိုင်ပြည်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်တစ်ဆက်တည်း
အာရဗ်တို့မှ တဆင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအမြစ်တွယ်လာခဲ့ သည်ဟုဖေါ်ပြ ထား ကြောင်း တွေ့ရသည်။
၁၃။- မြန်မာသမိုင်းအထူးပြုလေ့လာသူ Martin Smith က (၉) ရာစု `၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ရခိုင်ပြည်`၌ အခြေချနေ
ထိုင်ခဲ့သည် ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
၁၄။- G.E Harvey က မူ (၁၀) ရာစုမတိုင်ကတည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ရခိုင်ဒေသ တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
၁၅။- ရခိုင် သမိုင်ဆရာဦးစံရွှေပုက ဘင်္ဂလားဒေရှ် နှင့် ရခိုင်ဒေသသည် နယ်စပ်ချင်းဆက်စပ်နေ၍ ရခိုင်ဘက်တွင် အစ္စလာမ်သာရှိနေခြင်းကို သံသယပွါးမရှိဟု သုံးသပ်ဖေါ်ပြထားသည်။
၁၆။- AD m ၇၀၀ ကျော်မှာ ရခိုင်ပြည်ရမ်းဗြဲ(ရမ္မာဝတီ) ကျွန်းတဝိုက် အာရဗ်သဘောင်္များ လေမုန် တိုင်းပြီးပျက်စီးသွားရာ အာရဗ်ျွါတ်ဆလင်များသည် ရမ်းဗြဲ ကျွန်းအခြေချ နေခဲ့သည် ဖေါ်ပြသည်။ (၁၉၅၇ ခုနှစ် ထုတ် Burmese Gezetteer
Vol. 1 , District- P-19)
၁၇။- ကဝိဿရ ဘိ သီရိဝရ အဂ္ဂမဟာ ဓမ္မရာဇဝိရာဇ် ဂုရု ရခိုင်ဆရာတော်ဘုရား ပြုစုရေးသားသော ဓညဝတီ အရေးတော်ပုံ
စာအုပ်တွင် မူဿလံလူမျိုးဆိုပြီး ယခုအခေါ် မူဆလ်မံ ၊ ( ဆ ) နေရာတွင် (ဿ) ရေးသားထားကြောင်းတွေ့ရသည်။
၁၃။- ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်၊ ပထမအကြိမ်အကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော ဆရာဘိုးချယ် (ဆရာချယ်၊ပါတီဒီမိုကရေစအထွေထွေ
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်) ရေးသော ဗမာမွတ် ဆလင် တို့၏ ရှေးဟောင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ စဟာအုပ်စာမျက်နှာ (၁၆) တွင်
၁၈၇၉ ခုနှစ် ထုတ်ဗြိတိသျှဂေတိယ အရရမ်းဇြဲကျွန်းအနီး`၌ပျက်စီးသော အာရဗ် သဘောင်္သား မွတ်ဆလင်များ ထိုအချိန်
၁၈။- မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းသုတေသနမှူး ဂျာမန်လူမျိုးပညာရှင် ရန်ကုန်ကောလိပပါမောက္ခ အာမိလ်ဖိုခင်ဖါ
( Emil Forchamfer )၏ ရခိုင်ရှေးဟောင် လက်ရာအစီရင်ခံစာ(၁၈၉၂)ခုနှစ် ၊ ဓါတ်ပုံ ၆၈ (၄၂) ၊ စာမျက်ျနှာ ၆၀`၌
ထင်ရှားကြီးကျယ်သော မွတ်ဆလင်သူတော်စင် ဗုဒ္ဒေါရေအော်လီယာ(Budder Auliah )ကိုရည်မှန်းပြီး ဗုဒေါရ်မုကာန်
(စစ်တွေ) အားခရစ်နှစ် ၁၇၅၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
၁၉။- ရခိုင်ဒုတိယအရေးပိုင် Deputy Commissioner Col: Nelson Devies ၏မှတ်တမ်းအရ ၁၇၃၆ ခုနှစ်တွင်
စစ်တကောင်းမှစစ်တွေသို့ မာနိခ်ျ နှင့်ကျန်ညီနောင် ရောက်ရှိကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားသည် တွေ့ရသည်။
၂၀။- ၁၆၆၈ ခု၊နှစ် မင်းပြားမြို့နယ်၊ပန်းမြောင်းရွာတွင် အာလောင်မ် လောန်ကာဗလီ ၊ကန်ကြီး (၁၂) ရွာ
Permalink ၀ိုင်း က December 28, 2011 – 11:10am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
စလာမ်ပါ ကိုတင်မောင် ………. ကိုတင်မောင်က တော်တော်လေ့လာထားတာပဲနော် ……….. ကျွန်တော် ပိုသိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဗျ ……… တစ်ရက်လောက် အပြင်မှာဆုံပြီး ဆွေးနွေးကြရအောင် …………….
Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:12pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
စာလာဖတ်သူ (၄၀၀) ရှိသွားပြီ။တယောက်မှ
400 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
Permalink ၀ိုင်း က December 28, 2011 – 12:27pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
မာရှာအလ္လာဟ် …….. ကိုတင်မောင် လေ့လာအား တော်တော်ကောင်းတယ် ………..
ကျွန်တော်ပြောထားတာလေး ဖြေပေဦးနော် ……… ပိုပြီးသိချင်တာလေးကို ဆွေးနွေးကြရအောင် ……… 🙂
Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:33pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အင်ရှာ အလ္လာဟ်တွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။လောလော ဆယ် မအားသေးလို့ပါ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရှောင်နေလို့မိတ်ဆွေများနှင့် မတွေ့ဖြစ်တာပါ။မွတ်ဆလင်အတွက် လုပ်စရာအများကြီးကျန် သေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာရေးနေတာ အပြင်က မိတ်ဆွေတွေ မသိဘူး။ကျွန်တော်၏ တစ်နေ့တာ အလုပ်က ရုံးအလုပ်နှင့် စာဖတ်ခြင်း အလုပ်ဘဲ။အပြင်က မိတ်ဆွေများ ကို အသိပေးလိုက်ရင် နောက် လုပ်ရကိုင်ရ ကျပ်သွားပြီ။ကျွန်တော် မှာ အမျိုးသား စိတ်ပြင်းထန်နေတော သူတစ်ပါးကိုနားလည်အောင်ပြောပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုခု ရေးခိုင်းတာထက် ကိုယ်တိုင် ရေးပြီးအများကို မျှဝေလိုက်ရင် ပိုသက်သာပါတယ်။ဒီထဲမှာ အထင်လွှဲမှားပြီး အပြောခံရတာ ၊ဝေဖန်ခံရတာ တွေလဲ အများကြီးပါ။
ဒေါ် ဝိုင်းကျွန်တော် ကို မတွေ့ပေမဲ့ ကျွန်တော် က ဒေါ်ဝိုင်းဘေးမှာ အကြာကြီးရပ်ပြီးလေ့လာ
သွားဖူးတယ်။အကြောင်းက ဆိုဒ်ထဲမှာ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားနေသူတစ်ယောက်အတွက် ဂုဏ်ယူ
ပါတယ်။ လောလောဆယ် အီးမေးလ် contactထားပါ။ kotinmaung2010@gmail နှင့်ဆက် သွယ်ပါ။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပါ။အင်ရှာအလ္လာဟ် တစ်နေ့တွေ့ပါမယ်။- စလာမ်
Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:47pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အင်ရှာအလ္လာဟ် – တစ်နေ့ တွေ့ပါမယ်။
Permalink ၀ိုင်း က 12 မိနစ်အရင်က တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 1:03pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
Permalink မောင်လျှောက်(မြယာမြေ) က December 29, 2011 – 12:21pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
Permalink မောင်လျှောက်(မြယာမြေ) က December 29, 2011 – 12:40pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ဗမာမွတ်စလင်မှ ပသီ ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်ကိုခေါ်တာပါ။
kotinmaung နှင့်ကျွန်တော် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုပါသည်။အချိန်ရရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Permalink အဘစွာ က December 29, 2011 – 12:59pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ဒါဆို မြန်မာ နဲ့ ဗမာ က ဘာကွာတာလဲ ?
Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 1:21pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 1:37pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပုဂံခေတ်သူရဲကောင်း ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တ
မွတ်စလင် များမြန်မာနိုင်ငံသို့ အဦးဆုံးရောက်ရှိသည့် နေရာနှင့် ကာလ မှာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သည့် ပုဂံခေတ်
ခရစ်သကရာဇ် ၁၀၄၄ ခု ဟု မြန်မာ့ရာဇဝင်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဗျတ်ဝိ နှင့် ဗျတ္တ ဟု အမည်ရ သော ဗျတ်မျိုး
နွယ်ဝင် အာရပ် သင်္ဘောသား နှစ်ဦး သည် ၎င်းတို့စီးနင်းလာသော သင်္ဘောပျက်ရာမှ ပျဉ်ချပ်တစ်ချပ် ကို အမှီပြု၍ သထုံ
အနီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းခြေ တစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။  ( မျိုးနွယ် အမည် ဗျတ် ကို အီရတ်၊ အာရေဗျ နှင့် အချို့သောအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းသား စူရတီ မွတ်စလင်တို့အကြားတွင် ယနေ့တိုင်တွေ့ရှိ ရသည်။) ထို အာရပ် မွတ်စလင်
နှစ်ဦးသည်သထုံရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ခုတွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသူ နှစ်ဦး သည် အရပ်အမောင်းမြင့်မား ခံ့ညား ကြပြီး လျှင်မြန်ဖြတ်လတ် သန်မာသလို ရဲစွမ်းသတ္တိ လည်း ရှိ ၏ ဟု
ထို ဗျတ် ညီနောင်နှစ်ဦးအကြောင်းဖော်ပြထားသော မြန်မာ့ရာဇဝင် မှတ်တမ်း တစ်ခု တွင်မူ ထိုညီနောင်သည် ၎င်းတို့ခိုလှုံ
နေထိုင်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ၎င်းတို့အားခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့သောဘုန်းကြီးဆွမ်းစားရန် စီစဉ်ထားသော ဇော်ဂျီ အသေ
(ဇော်ဂျီ ရုပ်ကလာပ်) ၏ အသားကို စားပြီးနောက် ဆင်ပြောင်ကြီး တစ်ကောင်မျှ ခွန်အားကို ရရှိခဲ့ သည် ဟု မှတ်တမ်းတင်
ဖော်ပြထားသည်။ သထုံ ဘုရင် သည် ထိုညီနောင်တို့အား စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သဖြင့် အကြီးဖြစ်သူအား ၎င်း ၏ ဇနီးမယား၏
အိမ်တွင် အိပ်ပျော်နေခိုက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခဲ့သည်။
ညီငယ်ဖြစ်သူသည် ပုဂံသို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး အနော်ရထာမင်းကြီးအပါးတော်တွင်ဝင်ရောက်ခိုလှုံခစားခဲ့သည်။
သူသည် ပုဂံမြို့ နှင့် မိုင်ပေါင်းအတန်ငယ် ကွာဝေးသော ပုပ္ပါး တောင်သို့ တစ်နေ့လျှင် ဆယ်ကြိမ် သွား၍ ပန်းများကို
ယူလာရလေ့ရှိသည်။ ပုပ္ပါးရှိ မိန်းမပျိုတစ်ဦး နှင့် အကြောင်းပါ၍ ရွှေဖျင်းညီနောင်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သော သားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ မြန်မာ့သမိုင်း ၏ မှတ်တမ်း တစ်ခု ဖြစ်သည့် မှန်နန်းရာဇဝင် တွင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ သို့မွတ်စလင်တို့စတင် ရောက်ရှိသည့် ဒေသနှင့်ကာလကို ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး (မြန်မာအင်ပါယာ)
တွင်းခရစ်သကရာဇ် ၁၀၅၀ ခန့် ဟု ပြဆိုသည်။ ဗျတ်ဝိ နှင့် ဗျတ္တ ဟု အမည်ရသော အာရပ်ညီနောင်နှစ်ဦးတို့သည်သထုံ
သို့ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း ၊ သထုံ ဘုရင် သည် ထိုညီနောင် ၏ အစွမ်းသတ္တိ ကို ထိတ်လန့်မိပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူ
ဗျတ်ဝိ ကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ၊ အငယ်ဖြစ်သူ ဗျတ္တ သည် ပုဂံ သို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး
အနော်ရထာမင်းကြီး ထံတွင် ခိုလှုံခစား ခဲ့ကြောင်း ၊ ပုပ္ပါး အရပ်ရှိ မိန်းမပျိုတစ်ဦးနှင့် အကြောင်းပါခဲ့ပြီး ရွှေဖျဉ်း
ညီနောင် ဟု တွင်သော သားနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ကြောင်း ကို လည်းအဆိုပါ မှန်နန်းရာဇဝင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေဖျင်းညီနောင်တို့သည် လည်း အနော်ရထာမင်းထံပါးတွင် သူရဲကောင်းစစ်သည်တော် အဖြစ်အမှုတော်
ထမ်းခဲ့ကြသည်။ ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်းစည်းသို့ လျှို့ဝှက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရသော အထူးစစ်သည် အဖြစ်ပင် အမှုတော်
ထမ်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တရုတ်ဘုရင် ဥတည်ဘွား ၏ ကိုယ်ရံတော်အစောင့်အရှောက်တပ်များ ကို လျှို့ဝှက်
ထိုးဖောက်၍ ဥတည်ဘွား ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ထုံးဖြူဖြင့်မျဉ်းသုံးကြောင်းဆွဲခဲ့ပြီး နံရံပေါ်တွင် လည်း အနော်ရထာ
မင်းကြီး ၏ရာဇသံ ကို ရေးထားခဲ့သည့် အဖြစ်အကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမို ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ထိုအ
ကြောင်းခြင်းရာကြောင့် အင်အား စွမ်းပကား ကြီးမားလှသော တရုတ်စစ်တပ်ကြီးနှင့် တရုတ်ဘုရင်ကြီး တို့သည်
ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်၍ မြန်မာတို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
 ပုဂံပြည် ဦးတည်ဘွားတို့ အကြား အရေးတော်ပုံတွင် အောင်မြင်စွာအမှုတော်ထမ်းခဲ့ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်မူ
၎င်းတို့သည် ကွပ်မျက်ခြင်းခံခဲ့ကြရသည် ။ မန္တလေးမြို့ ၏ မြောက်ဖက် တောင်ပြုန်းအရပ်တွင် တည်ထားမည့် စေတီ
တစ်ဆူ ဌာပနာ ဆောက်လုပ် ရာတွင် ၎င်းတို့ ပါဝင် ရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ သဖြင့် ရာဇမာန်ရှခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်ဟု ယေဘုယျ
ညီနောင်နှစ်ဦး အား အညှိုးအတေးထားရှိသော သူတို့သည် စေတီ တွင် အုတ်နှစ်ချပ်စာနေရာကို အနော်ရထာမင်းကြီး
မြင်သာစေရန် အလွတ်ထားခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် အမှုသွားအမှုလာကို စုံစမ်းကြားနာစစ်ဆေးတော်မူပြီးနောက် ၎င်းညီနောင်နှစ်ဦးအားအမိန့်တော် မနာခံသည့် ပြစ်ဒဏ်မျှသာပေးရန် ရာဇသတ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းညီနောင်တို့
သည် ပြစ်ဒဏ် အစား သတ်ဖြတ် ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ် ပြီးနောက် အနော်ရထာမင်းကြီး၏ ဖောင်တော်သည် ရွေ့လျား ၍ မရပဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်း
မှာ ရွှေဖျင်းညီနောင်တို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်းကို မလိုလားသော မိတ်ဆွေ မင်းမှုထမ်း တို့၏ အသံတိတ် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခြင်း
ကြောင့် လည်း ဖြစ်ဖွယ်ရာသည်။ ထိုစဉ်က တော်ဝင် သင်္ဘောသားတို့ အများစုမှာ မွတ်စလင် များ ဖြစ်ကြသည်။
အိန္ဒိယလူမျိုး နန်းတွင်းပညာရှိ ပုဏ္ဏားဖြူ ပုဏ္ဏားမည်း များကရွှေဖျင်းညီနောင်တို့သည် အနော်ရထာမင်းကြီးအား
သစ္စ္စာစောင့်သိစွာ အမှုတော်ထမ်းခဲ့သော်လည်းမတရားသဖြင့် အပြစ်ပေး ခံရပြီး နတ် အဖြစ်သို့ ဘဝ ပြောင်းသွား၍ မကျေနပ်ချက်ကို ဖော်ပြ သည့်အနေဖြင့် တော်ဝင်ဖောင်တော်၏ တက်မ ကို ဆွဲကိုင် ထားသောကြောင့် ဖောင်တော်
ရွေ့လျားမရ ဖြစ်နေသည်ဟူ၍ လျှောက်တင် ကြသည်။ ထိုသို့လျှောက်တင်ကြသောအခါ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် ရွှေဖျဉ်းညီနောင်နှစ်ဦးအား ရည်စူး၍ နတ်ကွန်း ကြီးတစ်ခု ဆောက်လုပ်စေပြီး လူတို့အား ထိုညီနောင်ကို ကိုးကွယ်
စွမ်းပကားကြီးမား စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ သော ပြိုင်ဘက် တို့အား သတ်ဖြတ် ရှင်းလင်း ပြီးနောက် အသတ်ဖြတ်ခံ တို့ အား ကြည်ညို
သော ဘက်တော်သား မိတ်ဆွေ များ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေရန် အလို့ငှါ သေပြီးသောသူတို့ ၏ အစိမ်းနတ် ကို လူတို့ကိုးကွယ်
ရာ အဖြစ် သမုတ်၍ နတ်ကွန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း အလေ့သည်ရှေးမြန်မာဘုရင်တို့ ပြုလေ့ပြု ထ ရှိသော ရာဇ ပရိယာယ်
တစ်မျိုးသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် တောင်ပြုန်းရွာသည် ငါးရက် ခန့်စည်ကားသော ပွဲတော်ကြီး ကို နှစ်စဉ် ကျင်းပရာ
ဌာနေ တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ မန္တလေးမြို့ မြောက်ဖက်၁၄ ကီလိုမီတာ အကွာရှိ တောင်ပြုန်း ရွာတွင် နတ်ကွန်း ပေါင်း ၇၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးနတ်ကွန်း ၂၀၀၀ နီးပါးသည် ရွာ၏ အကျော်ကြားဆုံး မင်းသား ညီနောင်ဖြစ်ကြသည့် ရွှေဖျဉ်းကြီး နှင့် ရွှေဖျဉ်းလေး တို့အား ရည်စူးကိုးကွယ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။  ယနေ့တိုင် အယုံအကြည်ရှိသူများ သည်နတ်ကွန်း နှင့် ညီနောင်
နှစ်ဦးတို့အား ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထို ကိုးကွယ်သူ များသည် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသော်လည်း ဝက်သား
ကို ရှောင်ကြသည်။ ယနေ့တိုင် နှစ်စဉ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမြဲတောင်ပြုန်း ပွဲတော် သို့ သွားရောက်
စဉ် ဘတ်စ်ကား (သို့) ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ ဝက်သားကို သယ်ဆောင်သွားခြင်းမပြုရ ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ကြေကွဲဖွယ်ရာ ကွပ်မျက်မှု ကို အကြောင်းခံသည့်အုပ်ချပ်နှစ်ချပ်စာ နေရာလွတ်ကို ယနေ့တိုင် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြင့် ရွှေဖျဉ်းညီနောင်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး ယုံကြည်မှု ကြောင့် နှိပ်ကွပ် ခံရသည့် ဦးဆုံးသော မွတ်စလင်
များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီး (ခရစ် ၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက်ထက် တွင် မြန်မာမွတ်စလင် စစ်သည်တော်များနှင့်ကိုယ်ရံတော် သက်တော်စောင့် တပ်များလည်း ရှိခဲ့သည်။ မင်းကြီးစွာစော်ကဲ နန်းစံ အုပ်ချုပ်သော မွန်
(တလိုင်း) တို့ ၏ မြို့တော်မုတ္တမ မြို့ အား အနော်ရထာမင်းကြီး စစ်ပြုတိုက်ခိုက်စဉ် မွတ်စလင် စစ်တပ်အရာရှိ နှစ်ဦး
သည် အလွန် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံ ကာကွယ် ခဲ့သည်။ 
← ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(4)
ပသီလူမျိုးစု (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခြင်း)- စာမျက်နှာ(6) →